Ku soo dhowow inaad nala soo xiriirto Viljaskolan
Ganacsigeennu wuxuu bilaabmi doonaa bisha Ogos 2021. Haddii aad horeba u rabtay inaad mid ka mid ah nala soo xiriirto, waa lagugu soo dhaweynayaa inaad kula soo xiriirto emayl ama taleefan. Haddii aad rabto inaad nagula soo xiriirto luqad aan ahayn iswidhishka, waxaad email ugu soo diri kartaa luqaddaada waxaanan kula soo xiriiri doonnaa turjubaanka.
Patrick Gladh, Raktarka
Patrik Nystedt, agaasimaha guud
Waxaad sidoo kale nagala soo xiriiri kartaa: info@viljaskolan.se
424 65 Xanaaqsan
Cabashooyinka ama faallooyinka
Waxaad xaq u leedahay inaad ka cawdo ama faallo ka bixiso Viljaskolan haddii aadan ku qanacsanayn hawsha. Haddii aad cabasho qabto, waa inaad marka hore la xiriirtaa shaqaalaha ku lug leh ganacsiga taleefan, taleefan, email ama warqad.
Haddii aadan ku qanacsanayn in kastoo aad soo gudbisay cabasho ama haddii aad qabto cabasho guud ama faallo, waxaad buuxin kartaa foomka.